Inqanaba leCandy Crush 677 cheats kunye neengcebiso - Umdlalo weCandy Crush - Free Lives Tips Cheats Hints
You are here: Home / Uncategorized / Inqanaba leCandy Crush 677 cheats kunye neengcebiso
Last updated on EyeKhala 12, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Uluhlu lweemfuno zikaMaslow luchaza ngokucacileyo amanqanaba ahlukeneyo eemfuno umntu anazo. Ikwachaza nolandelelwano abantu abafuna ukuzaliseka ngalo. Ezi mfuno zezenyama, ukhuseleko, ezentlalo, ego, kunye nokuzithemba. Ukutyumza iilekese ngumdlalo okunceda ukuba ufezekise iimfuno zakho zentlalo ngeyona ndlela iphambili eyaziwa ngamadoda anamhlanje. I-Candy Crush ikunceda uqhagamshelane kwaye ukhuphisane nabantu kwihlabathi liphela. Abantu bafumana ukuma kwabo kweZizwe ngezizwe kumdlalo. Ngapha koko, oku kuzisa ukhuphiswano ngaphakathi kuwe kwaye kunceda ukukhula njengomntu. Bafunda kwaye baziqhelanise neempawu apha ezinokuthi zisetyenziswe kubomi obusebenzayo.
Abasebenzisi bafumana imvakalelo yokubandakanyeka, ngokuma kwamazwe ngamazwe kunye nemisebenzi eyahlukeneyo ikwenza ufune ukuqhubeka uzama, kwakhona kwakhona, ukwakha ezemidlalo umoya wenqanawa ngaphakathi kuwe kwaye kukunika imvakalelo yokufezekiswa. Oku kubaluleke kakhulu ukuba ukwazi ukuthatha-kokubini impumelelo kunye nokungaphumeleli komdlalo, kodwa ukunika ukomelela kancinci kwingqiqo yofezekiso silapha ukuze sikubonelele Inqanaba leCandy Crush 677 cheats kunye neengcebiso.
Eli nqanaba lijolise ekuzuzeni imiyalelo ye 10 iilekese ezinemigca kunye iilekese imidibaniso bahlulwe. Oku akuphelelanga xa usenza oku kufuneka ufumane amanqaku ubuncinane 20,000 amanqaku kwaye oku ayisosiphelo, konke oku kufuneka kwenziwe ngokufutshane 35 amanyathelo. Ukuba unokuzalisekisa injongo yenqanaba ngaphandle kokugqithisa umda wakho wokuhamba, uya kuba uphumelele kwinqanaba. Kubonakala kulula, ayenzi njalo? Kulungile, Umdlali oqhelekileyo uyazi ukuba oku kuya kufuna iiyure zokucwangcisa kwaye uzame, kunye neentsilelo ezininzi, you will win by chance. Nangona kunjalo, sikuncede nge win yakho sikunika yona Inqanaba leCandy Crush 677 cheats kunye neengcebiso ukuqhekeza eli nqanaba kwaye uqhubeke nohambo lwakho kumhlaba weCandy Crush Saga!
Candy Crush Level 677 Ukukopela kunye neengcebiso
Ngezantsi zikhankanyiwe Candy Crush Level 677 Ukukopela kunye neengcebiso ukwenza uhambo lwakho lwe-Candy Crush Saga lube lula kwaye lube mnandi:
Owona mqobo weli nqanaba yiLoco rise Xs njengoko ingabo abathintela iilekese zakho ezikhutshiweyo. Kucetyiswa ukuba ungachithi ixesha lakho, okanye uhamba, kwiimeringues ezimbalwa. Kuya kufuneka ususe i-Licorice ekhohlo nasekunene kwaye emva koko uqale ukuqokelela ezo candies ezinemigca kwaye ufezekise injongo yakho.
Obsession with anything is bad. Especially, kubi ukuba sithetha ngexesha lebhombu ezihlala zivela emdlalweni. Musa ukugxininisa ngabo. Njengokuba ngenyaniso, yinxalenye yomqobo. Just go with it, kanye ke zisebenziseni ngobulumko. Ngapha koko, zibeke kwii-combos ezahlukeneyo, kwaye ukhuphe iilekese ezininzi ezingabalulekanga kangangoko.
Sebenzisa izakhono zakho zokulawula kunye nokucwangcisa, yahlula iintshukumo zakho kunye nexesha. Kwi-avareji, kufuneka ufumane ilekese enemigca kwintshukumo nganye yesithathu, ngoku oku kufanele ukuba yinjongo yakho encinci. Ukwandisa amathuba akho okuphumelela: zama ukususa iibhloko ezininzi ukusuka kummandla osezantsi webhodi. Hence this would start a chain reaction resulting in a higher probability of getting combinations of striped candies.